Daawooyinka dabiiciga ah ee lagu Xanuuninayo Xanuunka kaadiheysta Xanuunsan - Hagaajinta Caafimaadkaaga - WAA KU SAMEEYAAN JAWAABTA
ACCUEIL » Daawooyinka dabiiciga ah Daawooyinka dabiiciga ah ee lagu Daaweynayo Xanuunka kaadiheysta Xanuunsan - Hagaajinta Caafimaadkaaga
Ka-guuleysiga xanuunka kaadiheysta ee xanuunka badan ma fududa waxayna u horseedi kartaa xanaaq iyo jahwareer badan kuwa ku dhaca. Sababta lama garanayo mana jirto dawo dhab ahaan waxtar u leh.
Daaweynta cilmu-nafsiga ayaa sidoo kale ku jira isbeddelada hab-nololeedka, iyo sidoo kale xakameynta walbahaarka oo kicin kara. Taasi waa sababta aan kugu ogeysiin doono daaweyn dabiici ah oo kaa caawin kara inaad ka bogsatid calaamadaha.
Waa maxay xanuunka kaadi haysta?
Xanuunka kaadiheysta ee xanuunka leh - horey ayaa loo yaqaan cystitis ku dhaca dhexda- waa cudur daba-dheeraada in waxay keentaa raaxo darro iyo xanuun kaadiheysta. Qofka ay ku dhacayso waa inuu badanaa kaadiyaa. Calaamadaha ayaa waxyar laga yaabaa inay kala duwanaan karaan iyadoo ku xiran bukaanka. Guud ahaan cudurkaan wuxuu ku dhacaa dumarka in kabadan ragga.
Cilmiga cilmu-nafsiga si weyn ayey wax uga beddelaan tayada nolosha bukaannadan. Waxay kaloo xanuun u horseedi kartaa galmada, dhibaatooyinka hurdo la'aanta iyo astaamaha kaadiheysta. Ugu dambeyntiina, waxay beddeli kartaa niyadda oo ay sababi kartaa walwal, walaac ama niyad jab.
Sidoo kale akhri: Sida loo maareeyo walaaca fekerka
Daawooyinka dabiiciga ah ee lagu Daaweeyo Xanuunka kaadiheysta ee Xanuunka Badan
Daaweynta dabiiciga ah ee lagu daaweeyo cudurka kaadiheysta waxay badanaa ku tiirsan tahay tiro yar ficillada cuntada iyo xakameynta walwalka. Intaa waxaa sii dheer, jimicsiga jimicsiga ayaa waliba waxtar yeelan kara ka dib marka aad la tashid takhtarkaaga.
Waxaa sidoo kale lagu talinayaa cilmu-nafsi si looga caawiyo welwelka iyo niyad-jabka. Hal ikhtiyaar waa daaweynta dabiiciga ah garashada iyo sidoo kale daaweynta ku caawisa nasashada.
Marka hore, si loo yareeyo xanuunka kaadi heysta, waxaan u isticmaali karnaa casiir ama kiniinno ku saleysan billar. Tani waxay si gaar ah u tahay dadka badanaa xanuunsada.
Faa'iidooyinka midabkan casaanka ee cudurkaan waxaa sabab u ah waxa ku jira gudaha anthocyanidins. Waxyaabahani waxay ka hortagi doonaan bakteeriyada inay u hoggaansanaato gidaarada kaadiheysta.
2. Soosaarka farcankii canab
Kadib, soosaarka abuurka canab waa qaali dabiici ah oo caan ku ah la dagaalanka cudurada. Waxay naga caawin kartaa inaan ka yaraynno xanuunka kaadi heysta iyada oo aan waxyeellooyinku ka soo bixin antibiyootigga caadiga ah.
Abuurka miraha liinta ah, oo ay weheliso dhismayaasha antioxidant-ka, lahaadaan guryaha dawooyinka lidka ku ah yareynta horumarka bakteeriyada iyo fangaska. Taasi waa sababta ay u noqon karto kabitaan si loo xoojiyo nidaamka jirkeena.
3. Bearberry ama cherry beran
Ugu dambeyntiina, beedka beeruhu ama loo yaqaan 'cherry bear' waa dawayn dabiici ah oo waxtar leh si looga hortago loona yareeyo xanuunka kaadi heysta iyo sidoo kale caabuqyada kaadi-mareenka guud ahaan. Si kastaba ha ahaatee waxaa lagu talinayaa in la cuno inta lagu jiro marxaladaha ugu horreeya eecudurka oo had iyo jeer ku jira kormeer caafimaad.
Ugu fiicnaanshuhu wuxuu noqon lahaa in la isku daro caleemo beedka leh dawooyinka kale ee dabiiciga ah. Waxaan sidoo kale u isticmaali karnaa sidii faleebo, kaabsal ama kiniinno. Waxay noqoneysaa iyada oo aan oranayn waan xushmeyneynaa kiiskan qiyaasta ay tilmaameyso soo-saaraha.
Ha cabin ama cabin? Waa maxay waxa ugu fiican?
Ugu dambeyntiina, bukaannada qaba xannuunka kaadiheysta ee xanuunka leh waxay la kulmaan xaqiiqda ah inay badanaa kaadiyaan. Tani waa sababta ay qaar u doortaan inay yareeyaan isticmaalka cabitaannada. Waxay u maleynayaan inay wax ka tari karto yareynta hiddo-wadayaasha qaarkood.
Si kastaba ha noqotee, biyo kululeyso maalinta oo dhan sidoo kale waxay ka caawisaa in lagu milo sunta kaadida. Kuwani waxay ka xanaaqi karaan haddii aan la daadguurin. Intaa waxaa sii dheer, hawo wanaagsan waxay u oggolaaneysaa marin hawo wanaagsan. Runtii calool fadhiga ayaa waliba uga sii dari kara astaamaha.
Si aad u aragto: Cunnooyinka 8 si kor loogu qaado transit-ka mindhicirkaaga
Talooyinkii ugu dambeeyay ee lagu yareeyo cudurka kaadiheysta xanuunka
Ugu dambeyntiina, ma ilaawi karno labadii talo ee ugu dambeysay oo aan badanaaba siinno kiiskan. Tan koowaad waa dooro dharka hoosta laga sameeyay ee dabiiciga ah sida suuf. Ta labaad waa in la ilaaliyo nadaafadda habboon ee qaybaha gaarka ah marka la aado suuliga. Si kale haddii loo dhigo, had iyo jeer ka bilow ilaa gadaal (xagga dabada).
Waxaan hadda ognahay qaar ka mid ah dawooyinka iyo tabaha kaa caawin kara yareynta xanuunka kaadiheysta xanuunka ama ugu yaraan hagaajinta tayada nolosheena. Way u qalantaa iskuday maxaa yeelay iyagu ma keenaan khatar caafimaad.
Caabuqyada kaadi mareenka ee carruurta
Ka raadi maqaalkan sida loo daaweeyo caabuqyada kaadi mareenka ee carruurta, iyo waa maxay astaamahooda. Read more »
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://amelioretasante.com/remedes-naturels-pour-soulager-le-syndrome-de-la-vessie-douloureuse/